Semalt: I-Database egqibeleleyo yokugcina i-Web Scraping Data
Ngaba i-Postgres ibamba isicatshulwa saseTshayina?
Ezinye i-webmasters ziphakamisa imibuzo malunga nokuba i-Postgres ilawula izibhalo zesiTshayina. Impendulo yalo mbuzo nguwe ewe omkhulu. Xa udala idatha, ifowuni yakho kunye nomqhubi weenkcukacha zizinto ezimbini ezibaluleke kakhulu. I-Postgres yile i-web scraping yedatha esebenza kunye nenkxaso ye-Unicode. Kwinkqubo yokwenza i-Postgres yakho yedatha, cinga ngokucacisa i-UTF-8 encoding.
Emva kweJSONB vs. I-database ye-NoSQL
i-NOSQL ikhululekile kwaye kulula ukusebenzisa i-database egcina idatha kwifomu evulekileyo. Ngokomzekelo, ukuba ukhiphe idatha kwiimarike zemali, kufuneka uqaphele ngendlela yokugcinwa kwedatha yakho. Le yilapho ingxaki ingena khona. I-database ye-NoSQL ayifaki ukuhlola isakhiwo seenkcukacha. Ukuba uyaphuthelwa le nyathelo, ufikelela ekubeni nedatha kwiifom ezingafundiwe.
Ngangomnye, i-Postgres, ngakolunye uhlangothi, ivumela abablogi kunye nabathengisi ukuba basebenzise inketho yesigqibelelo sedatha. I-postgres, i-web scraping database egciniweyo, idata ekhishwe kwiifom zobhanana. Olu lwazi luxhasa iiHSTORE kunye ne-JSON.
Ukusebenza kwithuba emva kwexesha
I-Postgres yindawo egciniweyo yokugcina idatha esetyenziselwa ukugcina ubuninzi bemali ekhishwe ngeelwimi ezahlukeneyo. Le nkcukacha yenzelwe ukufunwa kunye nokucoca iziphumo. I-Postgres i-JSONB iyaziwa nangokulawula abanye abalinganiswa beelwimi ezifana nesiTshayina. Ezinye iinkonzo zePostgres ziquka:
Ukukhutshwa kwedatha ngokuxhaswa ngokupheleleyo komntu;
Ukuqhutywa ngokukhawuleza kokucoca kunye nemisebenzi yokukhangela;
Ukugcina idatha echanekileyo ekhishwe kwii-tags ze-HTML;
Ukubuyiswa kwedatha esuka kwi iindawo zokurhweba nokuzigcina kwiifom ezifundwayo;
Kutheni i-Postgres i-JSONB?
I-database efanelekileyo ilungiselele iifom kwaye ihlele idatha kwiifasethi ezininzi ngexesha langempela. Ungavumeli ukulibaziseka kunye nexesha elichaphazelekayo lichaphazela iphrojekthi yakho yokutshiza. I-postgres isebenzisa iqoqo lemizimba yokuhlula idatha kwiinkcukacha ezahlukeneyo zokufumana ukulula.
Ukugcina idatha akukho konke malunga nexesha lokuphendula kunye nexesha lokuphendula. Uhlobo lohlaziyo luyakwenza konke. Sebenzisa amaqoqo ukuba ulayishe izinto ezingaphantsi kwaye ukhubaze uxwebhu lweenkcukacha uze ufeze ukupakisha idatha yakho. Oku kunceda abathengi ukulayisha ii-datasethi ezininzi ngexesha elilodwa.
Ukubonisa into eqhelekileyo akuzange kube lula. Nge-Postgres ye-web scraping database, unokukhawuleza uqhotyoshelise into eqhelekileyo ngokuhlelwa kwesihloko kwelinye umgca kwaye udibanisa irekhodi usebenzisa i-key integer yangaphandle.Ikhomputha yenkampani engundoqo yesizwe ukufumana iziphumo zakho.
Ngaba udibanisa zombini amaxwebhu kunye nezitafula zendabuko xa ugcina iiseti ezinkulu zeedatha? Asikho isidingo sokukhathazeka ngale nto. Vumela i-postgres i-JSON B yenza umsebenzi kuwe. Nge-Postgres i-web scraping database, akukho kuhlaziywa kwakhona okufunekayo Source .